थाहा खबर: प्रदीप नेपाल
फेसबुक नकारात्मकताको पर्याय बने बन्द हुनसक्छ
| मंसिर १२, २०७६
पश्चिमबाट सिक्ने कुरामा हामी निकै अघि छौं। राम्रो नराम्रो जे भेट्यो थालिहाल्यो सिक्न। राम्रो नराम्रो खुट्याउने तिर हाम्रो ध्यान जाँदैन। आमरुपमा भन्दा पश्चिमको सप्लाई हामीलाई त्यति फाप्दैन। अहिले म त्यही फाप्न नसकेको फेसबुकका बारे दुई चार कुरा गर्न चाहन्छु। कुनै पनि प्रवि...
मेरै हो महाकाली, मेरै त हो कालापानी...
फेसबुकमा अहिले कालापानी शब्द मच्चिएको मच्चियै छ। पढ्न रमाइलो लाग्छ। दौरा-सुरुवाल र ढाका टोपीमा चिटिक्क परेका एक बौद्धिक साथीले बडो आत्मविश्वासका साथ भन्‍नुभयो, ‘खाए नेताहरुले, अहिले त कालापानी मात्रै बुझाए, कुन दिन देशै बुझाउने हुन्।’ सायद उहाँलाई ...
विक्रम संवतको ०१७–१८ सालतिर नेपाल र दक्षिण कोरियाको स्थिति उस्तै थियो। कोरिया अहिले जस्तो विकसित थिएन। उल्टै त्यतिबेला दक्षिण कोरियालाई खाद्यान्न सहयोग गरेको थियो। त्यहाँ सत्ता पनि दुवै मुलुकमा उस्तै थिए, निरंकुश। दुई मुलुकका सत्ता सञ्‍चालकको मति भने फरक थि...
नेपालीले पाहुनालाई अद्भूतै स्वागत गर्दछन्। विश्वको सबैभन्दा शक्तिशाली (भन्दा केही बिग्रँदैन) पाहुनाको स्वागतमा नेपालले छि ! भन्‍ने ठाउँ कतै दिएन। ‘अतिथिदेवो भवः’ ले चिनिया राष्ट्रपति सि जिनपिङलाई खुशी र सम्मान दिएको अनुभूत गर्न सकिन्छ। कतिपयले ...
सन् १९८० को दशकमा मैले पार्टी केन्द्रीय कमिटीको निर्णय अनुसार भारत प्रवास कमिटीको जिम्मा लिनुपरेको थियो। त्यसबाहेक मैले केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा भाग लिन जाँदा भारतकै बाटो प्रयोग गर्नु पर्थ्यो। त्यतिबेला मैले बेलाबेलामा भेटेका पोस्टरहरु जीवनपर्यन्त भूल्न नसकिने खालका छन्। ...
संघीयता सबैको हो
संघीयता कुनै पनि पार्टीको सम्पत्ति होइन। बहुदलीय व्यवस्थाभन्दा संघीयता गुणात्मक हिसाबमै भिन्न छ। हो, केही समानता छन्। बहुदल मात्रै हुँदा पनि चुनाव हुन्थ्यो। जनप्रतिनिधि छानिन्थे। तर, त्यतिबेला प्रतिनिधिसभा र त्यसले गठन गरेको सरकार मालिक हुन्थे र तिनलाई मत दिने नोकर...
किताब र व्यवहारमा नपढिएको संघीयता
मैले अमेरिकामा काम गर्ने नेपाली श्रमिकको अवस्था देखेको छु। मलेशिया, कतार, बहराइन र मालदिव्सको जीवन पनि देखेको छु। भारतीय नेपाली श्रमिकहरू बीचमा पूरा एक वर्ष बिताएको छु। सबैभन्दा कठोर जीवन अमेरिकी श्रमिकको छ। अन्तको कुरा गर्दिनँ म, हारी जिती बरु भारत...
कस्मीरका सम्‍बन्धमा भारतले भुइँ तयारी नगरी झ्याप्प जस्तो निर्णय गर्‍यो त्यसले दक्षिण एसियामा तरंग ल्याउनु कुनै अस्वाभाविक भएन। नेपाल सरकारको औपचारिक प्रतिक्रियाको जानकारी भएन। केहीले, विशेष राज्यको सुविधा जनताले पाएनन्। केही सीमित परिवारमा केन्द्रित त्यो सुविध...
नेपालमा बुद्धिजीवीको खाँचो
दौरा लगाएर अथवा कोट पाइन्टसँग (क्रुसिफिकेसनको प्रतीक) ‘टाई’को गाँठो घाँटीमा कसेर कोही वौद्धिक हुँदैन। वौद्धिक हुनुको अर्थ हुन्छ अध्ययन, अनुसन्धान, नयाँ-नयाँ विषयको खोजी। नेपालमा यस्तो वौद्धिक समुदाय छ ? मैले भएजस्तो पाइरहेको छैन। पिएचड...
खै कसले नबुझेको हो
| बैशाख १३, २०७६
नेपाली राजनीतिमा, ६५ वर्ष चढेका नेताहरूको समय सिद्धियो। यो मेरो निष्कर्ष हो। तर अहिलेको राजनीतिक नेतृत्वमा ८० प्रतिशत नेताहरू त्यसभन्दा बुढा हुनुहुन्छ। त्यसैले अलमलिएको छ राजनीति। कुनै बेलाको युवाहरूले भरिएको कम्युनिस्ट पार्टीले नै आन्दोलनको सफल नेतृत्व गरेको थियो। त्...
संघीयताको विरोध : कुसमयको शहनाई
उहिले हामीले कक्षा दशमा लाटोबुंगोको कथा पढेका थियौँ। ढंग नजान्ने हुनाले जहिले पनि त्यो कुटाइ मात्र खान्थ्यो। अहिले आफूलाई नेता भन्नेहरूको ताल ठ्याक्कै त्यही लाटोबुंगोको जस्तो छ। नेपालका ठुला नेताहरू ब्रह्माजी हुन् कि राजनेता हुन् अहिले छुट्याउन गाह्रो हुन थालेको छ। कोह...
कति लुला भएछन्, हाम्रो पुस्ताका नेपालीहरू। डरबाहेक तिनको मनमा अरू केही छैन कि! पछिल्लो सन्दर्भ हो सिके राउतको। सिके राउतले नेतृत्व गरेको मधेसी गठबन्धनसँग सरकारले वार्ता गर्‍यो। मधेस गठबन्धनले स्वतन्त्र राज्यको माग छोड्ने र नेपालको अखण्डतालाई स्वीकार गर्ने, हतिया...
अब चाहिँ आफ्नो गाउँ आफैँ बनाऊँ
नेपालको राजनीतिक अर्थशास्त्रमा एउटा ठूलो मोड दिनु हुने राजनेता भरतमोहन अधिकारीले हामीलाई गाउँ जिम्मा लगाएर बिदा हुनु'भो। समृद्ध नेपालको एउटा तस्बिर समय छउन्जेल उहाँले स्याहारी रहनुभयो। अहिले, लौ है गाउँ बनाउने जिम्मा तपाईंहरूको भयो भनेर उहाँले धर्तीबाटै बिदा...
व्यक्ति, समूह र देश
सुविधाका लागि मान्छे पहिले आफ्नो बारेमा सोच्छ। वर्तमान परिपाटीमा यो स्वाभाविक पनि हो। ‘म खाउँ म लाऊँ सुखसयल वा मोज म गरूँ... भनी दाह्रा धस्ने षठदेखि छक्क परी, चिता खित्का छोडी अभयसित हाँस्यो मरी मरी’ भनेर कविशिरोमणि लेखनाथ पौडेलले त्यत्तिकै लेख्नु भएको ...
कुञ्‍ज नाटक घरमा १८ दिन र राष्ट्रपति निवासको प्रेक्षागृहमा एक साँझको बर्बरिक नाटकको, प्रदर्शनपछि झोराहाट नाट्य समूह खुसी हुँदै विराटनगर फर्कियो। हलहले खोलाको किनारको घरमा भएको नेकपा मालेको चौथो राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट आरम्भ भएको नाटक यसरी समाप्त हुन्छ...
महाभारतमा सबैभन्दा बढी अन्यायमा परेको पात्रको नाम थियो बर्बरिक। यो एक्काइसौँ शताब्दीमा पनि बर्बरिक नै अन्यायमा परेछ। विराटनगर नजिकै झोराहाट भन्ने ठाउँ छ। त्यहाँ एउटा नाटक मण्डली छ। त्यो नाटक मण्डलीले मदन भण्डारको पार्टीनाम ‘बर्बरिक’को परिचयमा एउटा ...
०४८ सालदेखि नेपाली राजनीतिमा दुई धार बगेका छन् र यो स्वाभाविक पनि हो। नेपाली कांग्रेसको पहिलो सरकारले नेपाललाई राजनीतिक संरचनाकै हिसाबले पुँजीवादी बनायो। कसैले नेपालमा विराटनगरमा पहिलो कारखाना खुलेदेखि नै नेपालमा पुँजीवाद प्रवेश गरेको हो भन्छन्, कोही ००७ साल...
संघीयता सिँगान पुछ्‌ने टालो होइन
हिजो सुझ न बुझ संघीयताको गीत गाउने नेपाली कांग्रेस, राप्रपा जस्ता राजनीतिक पार्टीहरूका लागि अहिले संघीयत घाँडो भएछ। उनीहरूका लागि यसको औचित्य समाप्त भएको हुनाले अब नेपाल एकीकृत, धार्मिक स्वतन्त्रतासहितको हिन्दु राष्ट्र हुनुपर्ने भएछ। मानौँ संघीयता सिँगान पुछ्&zw...
संघीयतालाई उज्यालोमा ल्याऊ
नेपालमा जनता अथवा नेता कसैलाई चाहिएर संघीयता आएको होइन। यो सही बाटोबाट आएको पनि होइन। यो आएको हो- छलाङ मारेर। नेपालमा धेरै कुरा छलाङ मारेरै आएका छन्। स्वयं गणतन्त्र छलाङ मारेरै आएको थियो। त्योसँगै आएको संघीयता त दोब्बर छलाङ मारेर आएको हो। त्यसैले यस्ता छल...
राष्ट्रिय पुँजीपति वर्गको खोजी
उहिले अर्थात् नेकपा माले भएको बेलामा हामी वर्ष वर्ष दिनमा मुलुकको वर्ग विश्लेषण गर्थ्यौँ र नेपालमा राष्ट्रिय पुँजीपति वर्ग कमजोर भएकोमा दुःखी हुन्थ्यौँ। सामन्तवाद, नोकरशाही पुँजीवाद बलियो भएको, त्यसैले सत्ताको चाबी आफ्नो गोजीमा राखेको देखेर मन दुखाउँथ्यौँ। त्यतिबेला...